Intsha yaseNewcastle ibiphume ngobuningi bayo ehholo lasoSizweni kwihlolokhono ebihlelwe i-Abusekho Christian Radio – Isambane News
Home > Featured > Intsha yaseNewcastle ibiphume ngobuningi bayo ehholo lasoSizweni kwihlolokhono ebihlelwe i-Abusekho Christian Radio
Intsha yaseNewcastle namaphethelo ngoMsombuluko ibuthanele eholo lomphakathi ukuyoqakambisa amakhono ayo emkhakheni wezokusakaza, njengoba umsakazo womphakathi wezinhlelo zokholo i-Abusekho Christian Radio Station isezinhlelweni zokuhlonza abasakazi abazoqhuba izinhlelo zomsakazo.
Ekhuluma enkulumweni ekhethekile nephephandaba lomphakathi oyedwa wabebequba loluhlelo, uCharle Dlamini oyi-Marketing manager kulomsakazo, uthi lomsakazo osohlelweni lokuthungatha abazoba ubuso balomsakazo, baqhube baphinde baphakamise zinhlelo negama lomsakazo. UDlamani uthi njengomsakazo bafisa ukunika uthuba intsha yaseMajuba namaphethelo ithuba lokukhula emkhakheni wokusakaza. “Iningi labantu abasha linayo intshisekelo nothando lokusebenza emkhakheni wezokusakaza nezindaba kodwa uthole ukuthi kwenye inkathi inkinga imali yokufunda, manje thina njengemisakazo yemiphakathi ilapho singenelela khona ukubanika ithuba lokubalolongela imisakazo emkhulu”.
UDlamini uthi leli uthuba elivuleleke kuwo wonke umuntu onesifiso sokufunda aphinde akhule kulomkhakha, ongezukulingisa umuntu othile kodwa ozoba nguyena. “Esikubheka kakhulu ukuthi umuntu abe nguye, aqhakambise ikhono lakhe alinikwa uNkulunkulu ngoba sonke kulomsakazo sizofunda sifundisane.
OkaSobhuza uthi lisekhona ithuba kubantu abasha abebengezwanga ngalenhlolokhono yabasakazi abafundi bezindaba o-producer kanye nama-reseacher ngoba abagcinile Osizweni kodwa basazoya eMadadeni nase dolobheni iNewcastle. Dlamini uthi ibalulekile imisakazo emncane yemphakathi ngoba inika umphakathi ulwazi olubanzi ngokwenzeka ezindaweni lapho behlalakhona. Kanti abasengathanda ukuya kunhlolokhono yalomsakazo, uDlamini uthi izinhlelo zimi ngalendlela ngoLwesithathu baseMadadeni community hall, ngomhla 22 kwephezulu baseFarmers hall edolodeni iNewcastle. NgoLwazi oluthethuthu ngalenhlolokhono uDlamini uthi abantu abasha bakhululekile ukuvakashela izinkundla zokuxhumana zomsakazo i-Abusekho Christian Radio noma balalele umsakazo ku-100.3 FM.